Waa Arday & Macalinkii Wadada U Furay!! - AKHRISO Xidhiidhka Ka Dhexeeya Tababarayaasha Caawa Champions League Ku Balansan Ee Tuchel & Nagelsmann - Gool24.Net
Waa Arday & Macalinkii Wadada U Furay!! – AKHRISO Xidhiidhka Ka Dhexeeya Tababarayaasha Caawa Champions League Ku Balansan Ee Tuchel & Nagelsmann
August 18, 2020 Apdihakem Omer Adam
Labada tababare ee wakhtigan kubadda cagta caalamka ugu magaca dheer leh ayaa lagu sifaynn karaa Jose Mourinho iyo Jurgen Klopp balse waxa jira tababare kale oo amaan ku mudan inuu soo saaro macalinka da’da yar ee Julian Nagelsmann.
Tababaraha inta ugu badan soo caawiyay Nagelsmann oo ah 33 sano jirka hoggaaminaya kooxda caawa wareega afar dhammaadka Champions League ciyaaraysa ee RB Leipzig ayaa ah Thomas Tuchel oo qudhiisu caawa PSG kala hor imanaya.
“Midka inta ugu badan isoo qaabeeyay waa Tuchel, , sababta fududi waa inuu ahaa tababarahayga” ayuu Nagelsmann yidhi horraantii sanadkan
13 sano kahor ayay ahayd markii Julian Nagelsmann oo ay dhaawacyo dishoodeen uu ahaa mid fadhiya qolka labiska ee xiddigaha da’yarta kooxda Augsburg isaga oo aan fahamsanayn waxa uu mustaqbalku u hayo xilli uu Tuchel tababare u ahaa.
Nagelsmann ayaa wakhtigaas ahaa kaliya 20 sano jir waxaana uu qabay dhaawac jilibka ah kaas oo su’aal geliyay haddiiba uu tababaraha ree Germany wakhtigaas waayo ciyaartoynimo oo sax ah qaadan doono.
Kaddib dhaawacyada haleelay Nagelsmann ee caqabada ku noqday waayihiisii ciyaaryahanimo, tababare Tuchel ayaa noqday shaqsiga iftiinka tusay isaga oo xilligaas u diray shaqooyin guri oo ah inuu faah-faahin uga keeno kolba xiddigaha kooxda kahor imanaysa.
Tuchel ayaa sheegay in Nagelsmann uu warbixino faah-faahin wanaagsan leh u keenay isaga oo intaas kaddib Nagelsmann bilaabay inuu da’yar kale tababare u noqdo kaddib xog ururintiisa wanaagsan.